PVC sooks usoro FAQ - Baoding Mingwang Irrigation Equipment Co., Ltd.
Kedu nha dabara adaba nke PVC ka m chọrọ?
Ihe kachasị mkpa mgbe ị na -arụ ọrụ PVC ọkpọkọ na akwa akwa bụ ọnụ nha. A 1 " dabara adaba ga -adaba na 1 " ọkpọkọ, n'agbanyeghị ma otu bụ nhazi oge 40 ma ọ bụ 80.
Ọ dị mma iji ọkpọkọ PVC maka mmiri ọkụ?
Isi drawback ka PVC ọkpọkọ bụ eziokwu na ọ nweghị ike eji na mmiri ọkụ ngwa. Mgbe ekpughere ya mmiri ọkụ, PVC ga -agha.
Ihe mkpuchi PVC ọ na -agbanwe?
Mgbe ọtụtụ mmadụ na -eche PVC, ha na -eche banyere ọkpọkọ ọcha na isi awọ ha na -eji na -arụ mmiri pọmpụ ụlọ ha. Ma PVC bụ ihe na -agbanwe agbanwe nke ukwuu, ọ nwekwara ike ịbụ mgbanwe nakwa nke siri ike. Ogologo ndị a ọkpọkọ PVC na -agbanwe agbanwe nwere ike inye gị ntụgharị iji mee ahịrị ebe ọkpọkọ ọkpọkọ agaghị aga.
Ọkụ mmanụ ụgbọ mmiri PVC na -eguzogide?
Nwere ike PVC na plastik ndị ọzọ hoses eji maka mmanu mmanu na gas? Na nkenke, azịza ya bụ mba, ha enweghị ike. ... N'ihi ọdịdị nke PVC na plastik ndị ọzọ kwa, ha adabaghị nke ọma maka iji mmanụ gas ma ọ bụ mmanụ ọkụ. PVC na plastik ndị ọzọ na -emebi ngwa ngwa na gburugburu oke okpomọkụ, ọ nwere ike malie ma ọ bụ gbawaa
Anụ ọhịa na -eri PVC na -agbanwe agbanwe?
Ọ naghị eguzogide ụmụ ahụhụ, ọkachasị, anwu amarala rie ọ. Nnyocha egosila PVC na -agbanwe agbanwe na -eme adighi adọta anwu, mana ọ bụrụ ịkwanyere mgbanwe a na -etinye ya n'etiti a nkeji oge akwu na ebe nri, ha nwere ike gbalịa rie ụzọ ha gafere ya